Ministeerri RIB Obbo Lammaa Magarsaa har’a miidiyaa irratti mul’ateera. - Kichuu
HomeAfaan OromooTVMinisteerri RIB Obbo Lammaa Magarsaa har’a miidiyaa irratti mul’ateera.
“”Obboo lammaa magarsaa , amaanaa sabaa hin nyaanne, qabsaahaa dhugaatii, Saba kanaaf nama rafee hin bulle, ammas Ittii abdanna,,”” jechuun faaruuf abdiin Ittii uffisamee eeggamaa jiru dogongora jedheen Amana.
Sababbiin isaas gaafa tokko as bahee Dr abiy waliin waliif gallee PAARTII BILTSIGINNAA kana akka oromoo fayyadutti waliif mallateesinee jirraattii ,. Sabni oromoo ta’e hundii BILTSIGINNAA filachuu qaba. Gaafa jedhe Saba kana burjaajjeessuun , karaa BILISUUMMAA maqsuu ta’aatii , dhaaduuf amataa irraa qabnu keessoo keenyaatti otuu hambifannee irra filatamaadha.
Baga nagaan biyyatti deebite beekaa namaa.
Dubbii PP tana irratti garuu yaada kee baldhinaan yoom dhageenya laata?